YawNathan Zinyaw: မတူညီတဲ့ ဆည်းဆာ
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 10:55 AM
တူညီတဲ့အချိန်တခုမှာ ကွဲပြားတဲ့ ခံစားမှု နှစ်ခုကို ရေးဖွဲ့မှုကို ခံစားသွားပါတယ်။
ဘ၀ သရုပ်မှန်တခုပဲ။ ဒါမျိုးတွေ များများရေးပေးပါ။
မရေးတုန်းကလည်း မရေးလို့။ ရေးမဲ့ ရေလိုက်တော့
လည်း ဘလော့အစား စာအုပ်ထုတ်ပါလားလို့။
ကိုယ့်ညီအကိုမောင်နှမ အချင်းချင်း မြှောက်တာ
ငါယုံကြည်ရာ ငါ့ကမ္ဘာ said...
အစ်မ အရမ်းကြိုက်တယ်။ ကိုယ်တိုင်ကအဲလိုမရေးတတ်တော့ ရေးတတ်တဲ့သူတွေရဲ့ Blog တွေပဲလည်ဖတ်ပြီး အားပေးနေရတယ်။
ကို လာဖတ်ပါတယ်---ဘဝသရုပ်ဖေါ် ရသ တခု
ပါပဲ--ယနေ့ခေတ် မြန်မာစာပေလောကမှာ--ဘဝသရုပ်ဖေါ်တွေ ကွယ်ပျောက်လုနီးပါး
ဝတ္ထုတိုများ ဘလော့လို့တောင် ပြောလို့ရတယ်ဗျာ။ အမြဲလာဖတ်ပါတယ်။ ကောင်းနေတာကို ကောင်းတယ်လို့ ထပ်မပြောတော့ပါဘူး။
ကျနော် ဖတ်ဖူးပါတယ်လို့ ထင်နေတာ။ မနေ့ ကထဲက ဖတ်ရင်းအခုလာပြန်ဖတ်တာ ။ ကျနော် အကြိုက်ဆုံးတွေက ဘ၀ သရုပ်ဖော်တွေကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ကျေးဇူးပါ
Nice one!! I love this post.. Though I m not Buddish.. I love Bagan..
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ တွေအလာနည်းတာ အခြားအကြောရင်င်းတွေလည်း အများကြီးရှိမှာပါ.. ဒါပေမယ့် ရှေးဟောင်းလက်ရာကို လေ့လာချင်တဲ့ Tourist တွေက ပြန်ပြင်ဆောက် ထားတဲ့ ခေတ် သစ် version ပုဂံ ကို စိတ်ဝင်စားမှုနည်းမှာအမှန်ပါဘဲ..ပုဂံ က နာမည်ကြီး တဲ့ဘုရားတော်တော်များများကို ပြန်ပြင်ဆောက်တာက တော့်တော့်ကို စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်..
Tourist attraction တခုအတွက်ဘဲမဟုတ်ရင်တောင် ရှေးဟောင်းလက်ရာတွေကို တန်ဖိုးထား ထိန်းသိမ်းသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်.. အခု ထိန်းသိမ်းပုံ ကြီးက ဖျက်ဆီး နေတာနဲ့ တူပါတယ်.. အဲ အဲ ယတြာချေတာ ဆိုရင်တော့ ................